Arjiga Gudida Sinaanta Metro ee Degmada King (2022-2023) Survey
Arjiga Gudida Sinaanta Metro ee Degmada King (2022-2023)
Arjigan waxaa lagu heleyaa Isbaanish, Fiitnaamiis, Jayniiska Fudud, Ruush, iyo Somali. Fadlan imeel ugu dir lnagel@kingcounty.gov ama la hadla (206) 477-6998 oo waxaanu kuu soo diri doonaa linkiga luuqada aad dalbatay.
Gudida Sinaanta Metro ee Degmada King waxay doon doonaysaa xubno bulshada ah oo shaqaale iyo wada shaqayn bulshada Madawga, Dhaladka, iyo Dadka Midabka ah (Black, Indigenous, People of Color, BIPOC) iyo/ama bulshooyinka kale inay dalbadaan kuraasta furan wakhtigan.
Hadii aad doonayso cadaalada gaadiidka, fadlan dalbo!
Wakhtigan ugu xidhan Degmada King hawlaha dhaqanka, shaqo mushahar leh ama aan lahayn, cibaado, waxbarasho, ka qaata adeegyo, iyo/ama xidhiidhka bulshada bara kacday.
Ugasoo joogay wax iyo/ama xirfad ahaan aqoon u leh caqabadaha gaadiidka ee bulshooyinka mudnaanta leh.
La kulmay cunsuriyad hay'adeed ama shaqo ama ikhtiyaarkii ugu dooda bulshada lagula kaco cunsuriyada.
Arjiyada waxaa wakhtigan akhrin doona xubnaha Gudida iyo shaqaalaha Metro. Shakhsiyaadka waxaa lagula xidhiidhi doonaa iimeel ahaan ugu danbayn Febraayo 18, 2022. Hadii lagu soo xusho, xubnaha waxaa looga fadhiyaa inay laba sano shaqeeyaan (2022-2023) oo waxaana la siin doonaa $75 saacadii. Kulamaha Gudida Sinaanta waxa la qaban doonaa hal mar bishii oo waxay socon doonaan 2 saacadood oo waxay marba noqon doonaan galabtii iyo habeenkii. Waxa aanu isla eegeynaa in aanu badalno wakhtiyada kulanka si aanu u waafajino jadwalo dheeraad ah, markaa waxa aanu kugu dhiiri gelinaynaa inaad dalbato, xataa hadii aad ka shakisan tahay in wakhtigu kugu haboon yahay. Kulamada waxaa lagu qabtaa maqal iyo muuqaal laakiin waxa aanu rajaynayaa in kulanka uu dib u noqon doono foolka-fool marka Tilmaamaha Degmada King ay noo saamaxaan.
Fadlan soo gudbi foomkan arjigan onlayn ah ugu danbayn Jimce, Janaayo 28, 2021 5:00 galabnimo.
* 1. Fadlan ku dar macluumaadkaaga xidhiidhka
Magaca Kowaad iyo Sadexaad *
Jinsiga aad doonayso in laguugu yeedho
Xidhiidhka aad la leedahay hay'ada bulshada, dugsiga, iskaashatada, ama dalada (hadii ay munaasab tahay)
Cinwaanka Iimeelka *
* 2. Bulshooyinka soo socda kee ayaad ku xidhan tahay? Waxaa kamid ah waxa aad la kulantay adiga iyo/ama kuwa aad lasoo shaqaysay.
Madaw, Dhalad, iyo Dadka Midabka ah (BIPOC)
Bulshooyinka dakhligoodu hooseeyo
Shacabka soo galaytiga iyo qaxootiga ah
Dadka laxaadka la'
Dadka la kulmay bilaa guri ama guri aan sugnayn
Dumar iyo dadka dumarka u dhaqdhaqaaqa
Shakhsiyaadka uu sameeyay nidaamka sharciga cadaaladu
Xaafado barakacay iyo/ama ku jira khatar wayn inay barakacaan
Dadka jidh ahaan waawayn
Laguma sheegin kor (fadlan sheeg)
* 3. Fadlan sheeg wixii kale ee aad la kulantay iyo/ama bulshooyinka aad la shaqaysaa ay la kulmeen ee lagu sheegey su'aasha hore, oo caqabado noocee ah ayaa oo la xidhiidha gaadiidka ayaad aragto oo saameeya bulshada?
* 4. Hadii aad la shaqayso hay'ad, waa maxay shaqadaadu hay'ada dhaxdeeda? Waa maxay deegaanka ay u shaqayso hay'adu? Sideed u filanaysaa in khibradaada hay'adan inay kaaga caawin doonto ka qayb galkaaga Gudida Sinaantu?
* 5. Macluumaad ama aqoon sidee ah ayaad kusoo kordhin kartaa ka wada hadalka sinaanta gaadiidka? Maxaad rajaynaysaa inaad ka hesho ka qayb galkaaga xubin ahaan?
* 6. Miyaad wakhtigan ama hore u gashay koox shaqo, ama gudi dawladeed? Hadii ay haa tahay, fadlan sheeg kooxda shaada, ama gudida aad ku jirtay.
Haa, fadlan sheeg kooxda
* 7. Fadlan sharax fahankaaga cunsuriyada hay'adeed, saamaynteeda kala saraynta qoomiyadaha iyo saamaynta ay ku leedahay bulshooyinka Madaw, Dhaladka iyo Dadka Midabka ah (BIPOC) ee Degmada King.
* 8. Ma jiraan wax dheeraad ah oo aad la kulantay, macluumaad, xirfado aad doonayso inaad u keento Gudida Sinaanta oo aad la wadaagto?
* 9. Su'aalaha Ikhtiyaarka Deegaanka
Waa maxay qoomiyada/isirka aad isku taaqaanaayi?
Waa maxay aqoonsi jinsigaagu?
Miyaad ku hadashaa luuqad kale oo aan ahayn Ingiriisi marka aad joogto guriga? Hadii ay haa tahay, luuqadee?